IINDIDI ZEMATRASI (ISIKHOKELO SOKUTHELEKISA) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Iindidi zematrasi (Isikhokelo sokuThelekisa)
Iindidi zematrasi (Isikhokelo sokuThelekisa)
Apha sabelana ngezona ntlobo zixhaphakileyo zoomatrasi kubandakanya imemori igwebu, i-hybrid, isizalo, i-latex, umoya oguqukayo kunye nokunye ukukunceda ufumane eyona ikulungeleyo. Oomatrasi yenye yezona zinto zibalulekileyo zefanitshala anokuzithenga umntu, kwaye kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo! Nantoni na oyikhethileyo iya kuchaphazela imikhwa yakho yokulala, umgangatho kunye nexesha elingakanani onqwenela ukulichitha ebhedini.
Ukuqina kunye nokuthamba kuya kuchaphazela indlela oziva ngayo umzimba wakho kunye nokusebenza kwiintsuku nakwiminyaka ezayo. Ukukuqala kwindlela elungileyo ezinye zeendidi onokukhetha kuzo. Ndwendwela apha ngaphezulu malunga nokuthandwa iintlobo zeebhedi .
Loluphi uhlobo lweMatrasi olulungele wena?
Umatrasi ogqwesileyo kubantu abalele ecaleni
Oomatrasi abalaseleyo abaleleyo besisu esiswini
Owona matrasi ungcono wokulala ngasemva kunye nabo baneengxaki zokubuya
Ufanele kangaphi ukufumana iMatrasi entsha
Iindidi zematrasi Ukuthelekisa
Imemori yeGel yeMatriki yeGel
Adapter yoomoya ehlengahlengiswayo
Ulukhetha njani udidi lwematrasi
Innerpring vs. Imemori iMatrasi
I-Latex vs iMemori Foam umatrasi
Ukuthenga iMatrasi (Ukuqwalaselwa ngaphambi kokuba uthenge)
Kukho oomatrasi abahlukeneyo abanokukhetha kubo ngenxa yokuba inye kuphela ayinakho ukusebenzela iipateni zokulala ezahlukeneyo zabantu bonke. Izikhundla ezahlukeneyo, ukumila komzimba, kunye neminqweno ziya kuchaphazela ukuthamba, izinto kunye nohlobo lonke lomatrasi ekufuneka lukhethwe. Olunye ukhetho lungezantsi, fumana olukufaneleyo kwaye ukhethe umatrasi ngokufanelekileyo.
Okokuqala, misela indlela yakho yokulala; ngaba ulala ecaleni, ulala ngesisu, okanye ulele ngasemva? Ukusuka apho cinga ngawo nawaphi na amanqanaba entlungu okanye olunye uhlobo lomzimba oluvela ekulaleni. Ngaba wena okanye iqabane lakho nihamba hamba xa belele, kwaye ngaba oko kuyenza enye okanye enye? Luhlobo luni lwenkxaso ocinga ukuba uya kuyidinga?
Emva kokumisela iimfuno zomatrasi oza kuwufuna, funda apha ngezantsi uze ubone ukuba uyahambelana na ocinga ukuba uya kuyidinga. Ngokwesiqhelo abantu banqwabelene phezulu kunye noomatrasi abaphezulu kunye neyona miqamelo ithambileyo abanokuyifumana, kodwa ngamanye amaxesha oko kuchasene ngqo noko bakufunayo, kwaye yintoni efunwa ngumzimba wabo.
10, Memory umatrasi amagwebu - Jonga kwi IAmazon
Olona hlobo lomatrasi kubantu abalele ecaleni iya kuba yigwebu lememori okanye oomatrasi bakaLatex. Xa ulele kwicala lakho wenza ukuba uzive uziva ubuhlungu okanye ungonwabanga emagxeni nasezinqeni, ngenxa yeendawo zoxinzelelo kunye nokungabikho kwenkxaso yokungena kweso sikhundla.
Ezo ngongoma ziya kucinezela ezibangela ukungonwabi. Ukuphelisa uxinzelelo emzimbeni kufuneka kubekho kunye nomphezulu othambileyo wokucinezela uxinzelelo esinqeni nasemagxeni.
ingaba usisa isipho kwitheko lokuzibandakanya
Imatrasi yomoya ehlengahlengiswayo- Jonga kwi IAmazon
Olona hlobo loomatrasi balala esiswini luya kuba lolunye ngokuqina okuphezulu, okufana nokulungiswa kombhede womoya, oku kungasetyenziselwa ukwandisa ukomelela ngokuhamba kwexesha ukunqanda ukungonwabi.
Ukulala esiswini sakho yeyona ndlela incinci icetyiswayo yokulala ngenxa yoxinzelelo olubeka entanyeni nasemqolo. Nangona oku kunceda ngokurhona kunye nokuphefumla ubuthongo kunokubangela iintlungu zangasemva ukuba awusebenzisi umatrasi olungileyo.
Injongo iya kuba kukuthintela isisu kunye nesinqe ekutshoneni ekubangeleni imiba yomqolo ekhankanywe ngaphambili.
Olona hlobo lomatrasi lwabazolala ngasemva luya kuba ngumatrasi ojolise kwinkxaso yomqolo. Ngokubanzi abo baneengxaki zangasemva bancomela i-foam okanye umatrasi we-latex kwiziphumo ezilungileyo.
Ngelixa unokufuna ukutsiba ngokuthe ngqo kweyona bhedi ithambileyo, egqibeleleyo onokuyifumana, kuya kuba kubalulekile ukufumana ibhedi ngenkxaso ukunqanda ukugqithisa kakhulu umqolo wakho. Ukuba inkxaso yangemva ayithathelwa ngqalelo kukho amandla aphezulu okufumana iintlungu ezisezantsi, eziya kwenza ukuba eyona bhedi intle ingacetyiswa.
Imatrasi ekhethiweyo kufuneka ibe yinto eya kuthintela ukutshona ebhedini. Iingcebiso ezilungileyo ziya kuba ngumatrasi wangaphakathi, i-hybrid, okanye umatrasi onokuhlengahlengiswa ngokuqina okuphezulu kunye nenqanaba lenkxaso.
Xa iintlungu zangasemva zikhona kubaluleke kakhulu ukuzinzisa umqolo xa ulele, kwaye oku kunokuhlala kunciphisa iintlungu zangasemva ezinokubangelwa kukulala. Kukho ezinye izisombululo ngokunjalo, kubandakanya ukubekwa komqamelo kunye nokulungisa indlela olala ngayo.
Lo ngumbuzo odumileyo onokwahluka ngokuxhomekeka ekubeni uwusebenzisa kangakanani umatrasi, ujikeleza kangaphi kuwo, kunye nomgangatho wawo wonke. Ngokubanzi, umatrasi kufuneka ubuyiselwe endaweni njengoko kucetyiswa liBhunga eliLungileyo lokulala rhoqo kwiminyaka esi-7 ukuya kweli-10.
Ewe ukuba umatrasi wakho uyashenxa okanye ibhokisi yakho yasentwasahlobo iqhekeze ii-slats kusenokwenzeka ukuba lixesha lokuba uthenge entsha. Ngokumalunga nobomi bohlobo loomatrasi kukholelwa ngokubanzi ukuba igwebu kunye neemodeli zelatex zibambe bhetele kuneemodeli zangaphakathi.
Ukuthenga uhlobo olulungileyo loomatrasi kunokuba yenye yezona zinto zibalulekileyo, kodwa akufuneki ukuba ibe kuphela kwento ebandakanyekayo xa kufikwa kukungonwabi okanye ukukhathazeka xa ulele. Ukulala kufanele kube ngumgangatho, kwaye ukufumana umatrasi olungileyo linyathelo lokuqala kwicala elifanelekileyo.
Uhlobo ngalunye lomatrasi lunezinto ezithile ezilungileyo nezingalunganga ezinokwenza umntu abe ngcono kunomnye. Apha ngezantsi kukho uthelekiso lokukunceda ukhethe efanelekileyo kwiimfuno zakho.
Umatrasi wangaphakathi inokuba ngumatrasi onawo ngoku kwaye ujonge ukuphinda okanye ukubuyisela. Le yenye yeematrasi ezindala nezithengwa rhoqo.
Nangona zezona zidala, kuye kwakho uhlaziyo kunye nokongezwa okwenziwe ukugcina oku kufanelekile kwaye kukhuphiswano kunye nezinye zeemveliso ezintsha ezibetha imarike.
Oomatrasi baya kusebenzisa inkqubo yenkxaso ebizwa ngokuba yikhoyili yentsimbi, isenza ukuba sizinze kakhulu. Kukho amalungiselelo amabini anokuthathwa ziikhoyili, ezo zinokudityaniswa okanye zisongelwe zodwa. Uhlobo oludityanisiweyo luya kuba ngumatrasi we-bouncier, kuba yonke i-coil iya kwiyunithi enye. Kulapho uziva khona yonke intshukumo ebhedini.
Isongelwe ngokukodwa iya kuba yinto echaseneyo, encinci kwaye ingabinakho ukuziva yonke intshukumo eyenziwa ngomnye umntu ebhedini. Ngelishwa, oomatrasi abazalwa ngaphakathi abanako ukumelana nothuli, ukungunda, okanye ii-allergen.
Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka uthabathe amanyathelo okhuseleko afana nokuhlamba rhoqo kunye nokunciphisa ukufuma. Oomatrasi basekuqaleni bazakuxabisa malunga ne- $ 100 ukuya kwi- $ 2000 ngokuxhomekeke kubungakanani, uphawu kunye nomgangatho.
Ngaphakathi komatrasi wekhoyili-Jonga le modeli kwi IAmazon
Njengoko bekutshiwo ngaphambili njengohlobo lwekhoyili oludityanisiweyo kumatrasi wangaphakathi wohlobo olu lwekhoyili luya kudibanisa konke kwinxalenye enye. Oku kwenza ukuba ibhedi ibouncier kwaye ibe inqweneleka kangako. Oku kunokwenza kube nzima ngakumbi ukulala ukuba kukho abantu ababini abalele ebhedini enye.
Isizathu sokuba olu khetho lukhethwe kungenxa yokuba lolunye lweendleko eziphantsi kwaye zihlala zisetyenziselwa abantwana okanye kwiindawo zikawonke-wonke ezinje ngeendawo zokulala, okanye iiflethi ezinikezelweyo.
Ikhoyili epokothweni okanye njengoko kukhankanyiwe ngaphambili njengekhoyili esongelweyo nganye ihluke ngokupheleleyo kumatrasi ohlobo oludibeneyo. Ezi coil, njengoko amagama esitsho, ziya kusebenza ngokwahlukeneyo zibangele ukuphazamiseka okuncinci kwiqabane elileleyo. Ukufumana inkxaso engakumbi, kuya kubakho ezinye iikhoyili ezongeziweyo ngenxa yamanqaku ongezelelweyo.
Ngaphakathi kwimatrasi yegwebu yenkumbulo
Iimatrasi zoMemori zeMemori ziye zathandwa ngakumbi kumaxesha akutshanje emva kokuba iyilelwe ukukhuhla ishattle space. Into eyenziweyo kukuhambisa ubunzima ngokulinganayo kunye nokuthatha ubume bomzimba wabasebenzisi.
Iba buthambile ngobushushu bomzimba, iyenze ihambelane ngokulula nomzimba kunye nokugcina ubushushu ukulungiselela ibhedi eshushu. Oku kunokongeza intuthuzelo kunye nentlungu kubasebenzisi. Kukho izinto ezinokuthi zichasane ne-gel-infusions ukunqanda ukufudumala ngelixa ulele.
Enye into edityanisiweyo koomatrasi bamagwebu enkumbulo kukuba bayingundo kunye neebhaktiriya ezinganyangekiyo. Ngazo zonke ezi zinto zikumgangatho ophakamileyo oomatrasi begwebu bememori banokuqhuba naphina ukusuka kwi- $ 100 ukuya kwi- $ 4000, ngokusekwe kubungakanani, uphawu kunye nomgangatho.
Imatrasi ye-foam memory
Umatrasi we-foam yememori ye-gel, njengoko kuchaziwe ngokufutshane ngaphambili kuya kuvumela imemori ye-foam ukuba ibe nokuhamba komoya okongezelelekileyo kwaye iphephe ukhuko olushushu kakhulu. Ngokusisiseko, umandlalo umiselwe ngesiseko senkxaso esisezantsi esomeleleyo kakhulu ukugcina umatrasi ungangeni.
Ke kukho omnye umaleko omncinci wenkxaso, kunye nomaleko wentuthuzelo wejel ngaphezulu. Okokugqibela, ngaphezulu kwento leyo yimemori yokuthuthuzela yenkumbulo yegwebu. Oku kuya kuba kwiindleko eziphezulu zokulumkisa oomatrasi begwebu benkumbulo ngenxa yomaleko owongeziweyo kunye netekhnoloji enefuthe.
Iimatrasi zeLatex zazithandwa kakhulu kwiminyaka yama-60 kwaye ziye zaqhubela phambili kancinci kumaxesha akutshanje. Xa zazisungulwa okokuqala, yayiyimveliso ebiza kakhulu kwiindleko zezixhobo eziphakamileyo kangaka. Le iseyimatrasi yokuphela ephezulu enezinto ezinkulu, kutsha nje iteknoloji ibenze baba ziindleko ezincinci.
Oomatrasi beLatex baqhele ukufunwa xa kuyilwa ubume bendalo. ILatex yimveliso evela kwizinto zepetroleum nakwizityalo, nto leyo eyenza ukuba ibe lukhetho lwendalo kumatrasi.
Izinto ezifanayo ziyafana noomatrasi bamagwebu benkumbulo abakhankanywe apha ngasentla kwinkxaso enikwayo. Oku kuya kunceda kuyo nayiphi na intlungu emva kwaye ugcine umzimba wakho ulungelelaniswe.
Enye into edityanisiweyo yezinto zelatex kukuba iya kuthintela uninzi lwentshukumo, kuba ukumkanikazi kunye nookumkani oku kuyanceda ukuba iqabane lokulala litshintsha kakhulu ebuthongweni babo. Iimatrasi ezininzi zelatex ezenziwayo namhlanje ziyi-latex hybrid equkethe i-latex yoyilo lwangaphakathi.
Iimatrasi zeHybrid ezinememori yegwebu ye-foam kunye nomqamelo ophezulu
Kanye njengoko igama libhekisele, umatrasi oxubeneyo uya kuba ngumatrasi owenziwe ngokudibanisa izinto ezininzi. Umatrasi oxubeneyo uza kudibanisa ezona mpawu zibalaseleyo kwiindidi zoomatrasi esizithandayo kwaye uzizise zibe nye.
Ukubandakanya intuthuzelo ethambileyo engumbandela ophambili koomatrasi bethambeka kunye nememori ngenkxaso efunekayo kakhulu enikwa ngoomatrasi abazalwa ngaphakathi, akukho mthengi oza kushiya engonwabanga ngoomatrasi abaxubeneyo.
Ezi zinokhetho oluninzi onokukhetha kuzo. Iimatrasi zeHybrid zinokuba sesiko ngokupheleleyo ukuthanda komntu onokubakho. Rhoqo umatrasi uyakwenziwa ngenxalenye yentsasa ezantsi, ukuxhasa ezinye iileya.
Ngaphezulu kwezi coil ziya kuhlala zineziqwengana ezininzi zememori yegwebu okanye i-latex, kulapho ulungelelwaniso lwesiqhelo lulunge khona. Ezinye zezi zinto ziya kubonelela ngeengqimba zejeli ngaphezulu, isakhiwo sesisele esivulekileyo, okanye ukumiliselwa kobhedu, kuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi wokugqibela.
Imatrasi yomoya ehlengahlengisiweyo ayisiyo umndilili womoya ohamba nawo oya nawo ekampini ehlathini. Umatrasi womoya onokuhlengahlengiswa uya kunika amava okulala akumgangatho ophezulu ngokuhamba ngokulula. Oomatrasi baya kulungelelaniswa kwicala ngalinye lomatrasi ukuze amaqabane abe nomgangatho owahlukileyo ekulaleni kwawo.
utolo wow erica mena utshatile
Lematrasi ayizukuthetha ngokuhamba kwexesha, yongeza nje umoya! Zijongeka ngokufana nezinye oomatrasi abakhankanyiweyo kwaye nangona oomatrasi bendabuko bebonelela ngenkxaso ngakumbi oomatrasi bomoya abaguquliweyo banceda kakhulu abantu abahamba rhoqo okanye abahamba kakhulu.
Gcina ukhumbula nangona ukuba umatrasi womoya oqhubela phambili ufuna ngakumbi iindleko ziya kunyuka. Iimpawu zoomatrasi zomoya ezihlengahlengiswayo ezidumileyo ziNombolo yokulala, iSerta kunye neSealy Posturepedic.
Njengazo zonke ezinye izinto ezinombhalo we-organic, oomatrasi abasebenza ngezinto eziphilayo, nazo, ziya kuba zezendalo njengokuba zinokwenzeka. Ezi zinto zinobuhlobo kwindalo esingqongileyo kwaye zinciphisa ukubonakaliswa kweekhemikhali kunye neetyhefu ezenza imveliso ekhuselekileyo.
Ezinye zezinto zendalo ezisoloko zisetyenziswa koomatrasi bezinto eziphilayo ziya kuba zezi: iikhottoni eziphilayo, uboya obugalelweyo, iikhoyili zenkxaso eziphinda zenziwe zenziwe ngentsimbi, kunye nelatex yendalo.
Oku kuya kubakho esidlangalaleni malunga neemveliso eziphilayo abazisebenzisayo, ngakumbi ukuba ziGreenGuard Gold Certified, eya kuba yeyona nto ingcono onokuyifumana. Ngezi zinto zibekiweyo eziqhuba iindleko zoomatrasi phezulu, kodwa leliphi ixabiso elibaluleke ngakumbi okanye okusingqongileyo kunye nokhuseleko lwakho?
Umatrasi we-futon uya kuba ngumatrasi osetyenziswa njengesihlalo. Oku kuhlala kusetyenziswa kwiidorms kunye namagumbi amancinci apho ukwabelana ngendawo phakathi kwabantu kunye nendawo yokulala kunye nendawo yokuhlala yinto eyimfuneko.
Ngelixa oomatrasi be-futon bahlala beqinile, kuya kufuneka babhetyebhetye ukusonga kwaye babe sisingqengqelo xa kufuneka njalo. Oku kunokwenziwa ngenani lezinto ezahlukeneyo kubandakanya amagwebu, iiprinta zangaphakathi, ipholiyesta, okanye umqhaphu.
Ngaphakathi komatrasi onamanzi
Iibhedi zamanzi yayizizinto zonke ezazinomsindo emva phaya koo-70-80 kodwa ngoku zizinto zexesha elidlulileyo. Ezi bhedi zisasetyenziswa ukuthengwa kodwa zixhaphake kakhulu. Ibhedi yamanzi yenziwa ngokusebenzisa, uqikelele, amanzi. Kukho amagumbi amanzi aya kuba kwicala ethambileyo okanye icala elinzima.
Ukuba ukhethe igumbi elinamacala alukhuni liya kujikelezwa sisakhelo somthi esixande kwaye emva koko sigutyungelwe ngokudibanisa kunye nokwenza izinto. Amagumbi asemacaleni athambileyo aya kujikelezwa sisakhelo esiqinileyo sogwebu endaweni yomthi, sikwanogqunywe nge-padding kunye ne-upholstery.
Olunye ukhetho kunye nenketho uninzi lweengqondo luya kuyo xa ucinga ngebhedi yamanzi yinkqubo yegumbi lokuhamba yasimahla. Oku kunika intshukumo yolwandle evumela amanzi ukuba ahambe phakathi kwamagumbi.
Ukunyathela ngokuhamba kancinci okuncinci kukho ukhetho olungenamaza olucutha ukuhamba ngokuthelekiswa nenguqulelo yasimahla yokuhamba. Ngelixa ukhetho olukhethekileyo, iibhedi zamanzi zinentsingiselo engabizi kakhulu ukuba unomdla wokuzama ngaphandle kokulimaza!
Ngenkqubela phambili entsha, itekhnoloji ithatha yonke into, ukulala kubandakanya. Kukho ubuchwepheshe bematrasi obukrelekrele obuquka izinto ezinje ngokulandela umkhondo ubushushu bomzimba womsebenzisi, iintshukumo, ukuphefumla kunye nokubetha kwentliziyo.
Iitekhnoloji ziya kusebenzisa idatha abaziqokelelayo kumzimba womsebenzisi ukuze ikwazi ukwenza uhlengahlengiso ngelixa uleleyo ukuze wenze umgangatho olungileyo wokulala kubasebenzisi. Ngokusebenza okongeziweyo nangona kuza ithegi yexabiso elongeziweyo.
Yimalini usuku lomququzeleli womtshato
Ngethemba njengoko amaxesha eqhubeka kwaye ezi ziye zithandwa ngakumbi amaxabiso aya kuhla ukuzenza zifikeleleke ngakumbi kumthengi ophakathi.
Isimo somoya kunye nesifudumezi sematrasi-Jonga kwi IAmazon
Olunye uphuhliso olunomdla koomatrasi ziiyunithi zolawulo lwemozulu. Ezi zixhobo ngokusetyenziswa kwenkqubo yokungenisa umoya zinokufudumeza okanye zipholise ibhedi kuxhomekeke kubuchwephesha bakho. Abanye bade babe ne-aromatherapy eyakhelwe-ngaphakathi ekusebenziseni iioyile zakho ezibalulekileyo.
Ukunciphisa ukuya koomatrasi ababini yinto enkulu, ngoku nje kukuxoxa phakathi kwabo bobabini. Olunye ukhetho kukusebenzisa encinci kuzo zombini kwaye wenze umatrasi we-hybrid.
Oku kuluncedo ngakumbi ukuba amaqabane amabini akakwazi ukwenza iingqondo malunga nokuba loluphi uhlobo lomatrasi abaya kuludinga kwaye banokujoyina imikhosi kwaye bobabini benze isivumelwano sokufumana intuthuzelo kunye nenkxaso efanelekileyo.
Ukuba i-hybrid ayisiyakho kwaye uxoxa phakathi koomatshini bokungenisa kunye ne-foam, nalu uthelekiso olwenziwe phakathi koomatrasi abathathu abasetyenziswa ngokuxhaphakileyo, kunye nezo unokuphikisana ngazo phakathi, ukunceda ukulinganisa izinto ezilungileyo nezingalunganga nganye.
Oomatrasi basekuqaleni kunye noomatrasi begwebu bememori zizinto ezichaseneyo, banikezela ngeempawu ezahlukileyo kakhulu kwaye baya kuthi bathethe nabantu abahluke ngokupheleleyo. Ngelixa zombini ezi zikhetho zilungileyo zihlala zixhomekeke kubasebenzisi bomzimba kunye nokukhetha. Ukuvavanya iibhedi kwivenkile kunokuba yindlela elungileyo yokubona ukuba loluphi uhlobo oluziva lungcono kuwe.
Oomatrasi basekuqaleni baya kugxila kwinkxaso. Ezi ntlobo zoomatrasi ziya kuba zilungele abantu abaneengxaki zomqolo okanye ezinokubakho iingxaki zangasemva. Xa uxhasa ngokufanelekileyo uxinzelelo lomqolo uyasuswa onokuthi ukhulule iintlungu zomqolo abanye abantu abazive ukuba abanayo inkxaso eyaneleyo yoomatrasi. Oku kuya kuthi rhoqo kube ngabantu abalala ngomqolo.
Ngelishwa oomatrasi basekuqaleni abayi kumelana nezinto ezifana nokubumba, ukungunda, iibug bugs, njl. Oku kunokubangela umba ngakumbi kwiindawo ezichaphazeleka kwizinto ezinje.
Ngokwahlukileyo koko, oomatrasi begwebu bememori baya kugxila kwintuthuzelo kunye nokuhambelana nomzimba. Oku kuhlala kuyimatrasi wonke umntu acinga ukuba ufuna. Kwithiyori ukhululeke ngakumbi ngcono, kunene, kulungile akunjalo ngalo lonke ixesha.
Kwabalele ecaleni, oomatrasi begwebu bememori balungile, kodwa njengoko bekutshiwo ngaphambili abaleleyo bangakhetha into ngenkxaso ethe kratya. Ngethamsanqa, ezi oomatrasi bamagwebu enkumbulo baya kumelana nezinto ezingekhoyo oomatrasi abangaphakathi, ezenza ukuba zibe lukhetho olungcono kwiimeko eziya kufuna ukumelana nokubumba nokungunda.
Iimatrasi zeMemori zeMemori ziya kuba nakho ukulawula ubushushu bomzimba ngcono kunokuba zikhuphisana ne-innerspring ezinokongezwa ngezinto ezahlukeneyo ezichazwe apha ngasentla.
Iimatrasi zeLatex kunye nenkumbulo zinenxalenye elungileyo yokufana xa kuziwa kwiimpawu, kodwa zikhetho ezimbini ezahlukileyo kakhulu kwaye nazi ezinye ecaleni kothelekiso lwezi zinto zimbini.
Umatrasi we-latex uya kuba yenye yeendlela zokukhetha okusingqongileyo ezifumanekayo kusetyenziswa izixhobo zendalo kunye nepetroleum ukwenza umatrasi. Ngelishwa oku kuya kubangela ukuba umatrasi ube phezulu ngenxa yeendleko zezinto ezisetyenziswayo nazo ziphezulu.
Ngokwahlukileyo, oomatrasi begwebu bememori balayishwe ngeekhemikhali ezirhabaxa kwaye abazisebenzisi izinto ezinobungozi kwindalo xa kufikwa kulwakhiwo lomandlalo.
Xa kuthelekiswa nomatrasi we-latex oomatrasi begwebu bememori baya kuphumelela, yiyo loo nto izixhobo zikhethwe, ngaphandle kokungakhathalelwa kwendalo. Oomatrasi begwebu benkumbulo nabo baya kuba neendleko ezifanelekileyo ngakumbi kunoomatrasi bakaratex.
Ngaphandle komehluko okhankanywe apha ngasentla umatrasi we-latex kunye noomatrasi bamagwebu enkumbulo baya kuba nentuthuzelo efanayo kunye neempawu zenkxaso, njengoko kukhankanyiwe, amagwebu enkumbulo ayigqitha kancinane i-latex. Ezi ndidi zimbini zoomatrasi zenziwe ngokufanayo kwaye ziyakwazi ukuthintela intshukumo kakuhle.
Kuya kubakho iintlobo ezahlukeneyo zokhetho xa kufikwa kubungakanani boomatrasi kwaye ezi ziya kusetyenziswa kwindalo iphela kuzo zonke iintlobo zeempawu kunye neendawo.
Ngokusekwe kwi- ubungakanani bebhedi unqweneleka, indawo yegumbi lakho, inani labantu abasebenzisa umatrasi, kwaye luhlobo luni lomntu wokulala umsebenzisi ngamnye oya kuba yinto emisela ubungakanani bomatrasi obufunekayo.
Qiniseka ukuba ulinganisa naziphi na iingcango okanye iiarchways ezinokufuna ukwenziwa umatrasi ukuze ufike kwindawo oyifunayo ukuze uqiniseke ukuba uyongena. Umatrasi ngamnye uya kusetyenziswa kakuhle kwimeko eyahlukileyo; ubukhulu zezi zilandelayo.
Iwele Ubukhulu bamawele oomatrasi buya kuba ziisentimitha ezingama-75 ubude nge-38 intshi ububanzi. Ezi zinto zenzelwe umntu omnye, zihlala zingumntwana okanye umntu omdala. Umatrasi omabini amawele yenye yeematrasi ezincinane ezikhoyo. Oomatrasi ngawona aya kusetyenziswa kakhulu kwiibhedi zebhedi kunye nokusetyenziswa kwebhedi yosuku.
Umahluko kumatrasi ombini yiwele i-XL umatrasi, elongeza ii-intshi ezintlanu kubude bebhedi. Eli nqaku livumela ulutsha olude okanye abantwana beekholeji ukuba babe nakho ukusebenzisa oomatrasi abangamawele ngaphandle kwemilenze yabo ejinga esiphelweni sebhedi.
Igcwele Umatrasi opheleleyo uya kuba ngamasentimitha angama-54 ububanzi nama-intshi ama-75 ubude. Igcwele kwakhona ibizwa ngokuba yimatrasi ephindwe kabini. Ezi zihlala zisetyenziselwa abantu abodwa abafuna elinye igumbi lokusasazeka.
Ezi zihlala zibekwa kwiidorms zekholeji nakwindawo yokuhlala kunye namagumbi okulala. Oomatrasi abagcweleyo baya kuba bufutshane njengoomatrasi abangamawele ke ngoko, nabo banokhetho lwe-XL ekunikezeleni ngee-intshi ezintlanu ubude kwigumbi leenyawo elongezelelweyo.
Ukumkanikazi Umatrasi omkhulukazi uyalinganisa ii-intshi ezingama-60 ububanzi kunye nee-intshi ezingama-80 ubude. Ubungakanani bematrasi buya kuba yenye yeematrasi ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngenxa yobude obude kunye nendawo yomntu omnye okanye ababini ukuze balale phezu kwayo. Oku kuya kuhlala kusetyenziswa kwizibini ezitshatileyo okanye kumagumbi eendwendwe kunye neehotele.
Kumkani -Imatrasi yokumkani ilinganisa i-intshi ezingama-76 ububanzi ngama-80 e-intshi ubude. Le yenye yeentlobo ezinkulu zoomatrasi isetyenziswa kakhulu kwigumbi lokulala eliphezulu ngenxa yesidingo sendawo. Oomatrasi abalinganiswa ngobukhulu baphindwe kabini ubukhulu bewele, elinika indawo eninzi yokuba babelane ngabantu ababini. Ezi zihlala zisetyenziswa kwiihotele, oku kwenzelwa ukuba xa abantu babelana ingengabo abatshatileyo, basenayo indawo yobuqu.
UKumkani waseCalifornia -Imatrasi yaseKhalifoniya luhlobo olujikelezayo oluhlobo oluqhelekileyo, ukongeza ii-intshi ezi-4 ubude kunye nokuthatha ii-intshi ezine okanye ububanzi. Oku kunceda kwimicimbi yendawo oomatrasi abancinci benkosi banokufika kubo kwaye kuyanceda nakubaphi na abantu abade.
Oku kuhlala kusetyenziswa kumagumbi okulala amakhulu kunye namagumbi apho isibini esilala khona ebhedini sicwangcisa ukuba nomntwana omncinci okanye isilwanyana sibajoyine, sisenza indawo yokuba wonke umntu alale kamnandi.
Ngelixa oomatrasi benkosi kunye nabaseKhalifoniya bezona zinkulu koomatrasi, kukho oomatrasi abangaphezulu kakhulu abanga-odolwa ngokukodwa.
Inkosi yaseWyoming iyakuba zi-intshi ezingama-84 ubude nobubanzi, idibanisa ii-intshi ezi-4 ezithe zathathwa yinkosi yaseCalifornia zenza igumbi elongezelelekileyo lokwabelana ngomatrasi nezilwanyana zasekhaya okanye abantwana abancinci.
Inkosi yaseAlaska nangona iyinto yokubona. Inkosi yaseAlaska i-intshi ezingama-108 ngobude nobubanzi, inika indawo ukuya kuthi ga kubantu aba-4. Uya kufuna ukuqiniseka ukuba unokufumana enye yezi ngomnyango wangaphambili ngaphambi kokuba uyithenge!
Intwasahlobo yebhokisi - Enye into onokuyifuna malunga nayo yibhokisi yasentwasahlobo yokuhamba noomatrasi bakho abatsha. Oku kufuneka ube nako ukuba ufumana umatrasi ongaphakathi. Oku kuyakusindisa ibhedi kwaye kuyenze ihlale ixesha elide.
Eminye imatrasi njengoko kukhankanyiwe malunga nayo iya kuba yakhile ngenkxaso kwaye ayizukufuna ibhokisi yasentwasahlobo, kodwa ezinye zinewaranti ziya kufuna ukuba uyifumane nayo intwasahlobo yebhokisi.
Ngokusekwe koku unokuthatha isigqibo sokuba ngaba uya kuyidinga enye okanye ungayenza ngaphandle kwayo, nangona kucetyiswa ukuba ufumane ibhokisi ehambelana nayo. Olunye ukhetho lunokuba: ukuba nebhedi yeqonga okanye ukufumana iziseko ezihlengahlengayo zebhedi.
Intwasahlobo yebhokisi inokuba zii-5 ukuya kwi-5 ½ i-intshi ubude okanye i-intshi ezi-9 ubude. Zenziwe ngomthi kwaye zimile okomatrasi oza kubekwa phezu kwayo. Kuya kubakho imithombo ngaphakathi kwebhokisi eyenziwe ngomthi eyenziwe ngomthi.
Ngoku ukuba uqonde ngcono oomatrasi kunye neempawu zabo, kunye nazo naziphi na izinto ezongeziweyo ezinokufuneka kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokutsiba ebhedini! Ezinye zezo ngqwalaselo zezi zilandelayo:
Uhlahlo lwabiwo-mali Uhlahlo-lwabiwo mali luya kwenza okanye luyeke naluphi na uhlobo lokuthenga, ngakumbi xa kuthengiswa abantu ababandakanyekayo. Kuhlala kubalulekile ukukhumbula ukuba yintoni uhlahlo-lwabiwo mali kwaye unamathele kulo!
iingoma zokungena komtshakazi nomyeni
Ngamanye amaxesha, xa uzama ukunqanda ukuthengisa okungathandekiyo kwezongezo kunye nokongeza kuyanceda ukuthenga kwi-Intanethi. Qiniseka ukuba uyazi uhlahlo-lwabiwo mali ngaphambi kokuba ujonge kwaye uqiniseke ukuba uqaphela zonke ezinye izinto oza kuzifuna.
Ngamaxesha athile, ngezinto ezinkulu ezinamaxabiso anje ngezi, kuyakubakho indawo yothethathethwano, enokonga uhlahlo-lwabiwo mali. Ukwazi amaxabiso okhuphiswano kunye neemodeli ezifanayo kunokukunceda ube ne-bargaining chip ukuze ufumane isivumelwano esingcono. Rhoqo abantu abathengisayo bafuna ukwenza intengiso kwaye banokutsala imitya ukunciphisa ixabiso ukuba ikwenza uthenge.
Ukuhanjiswa - Imali yokuhanjiswa iya kuba yindleko eyongezelelweyo kumatrasi ngokwawo kwaye zihlala zibiza kakhulu. Ukuhanjiswa kwabantu baya kufaka umatrasi apho kufuneka uye khona kwaye uyikhathalele yonke loo nto, eluncedo kakhulu, kodwa ukuba ikhona indlela yokwenza ngokwakho ungagcina ipeni entle.
Xa ihanjiswa, qiniseka ukuba uyayijonga ukuze uqiniseke ukuba akukho bala okanye naziphi na iintlobo zomonakalo ezinokwenzeka kwimveliso okanye kwezothutho. Oku kuyakusindisa kwimeko apho kuya kubakho amabango kwixesha elizayo.
Isiqinisekiso - Xa uthenga nantoni yexabiso okanye ixabiso elikhulu, elifana noomatrasi, kusoloko kulungile ukuqwalasela iwaranti eyongezelelweyo. Uninzi lwabathengisi luya kuba newaranti eyakhelwe kwimveliso xa ithengiwe. Oku kunokuba naphi na ukusuka kunyaka omnye ukuya kwiminyaka engama-25, oko kuthetha ukuba ukujonga ngokuqinisekileyo kulifanele ixesha lakho.
Rhoqo iwaranti yomthengisi iya kugubungela kuphela izinto ezincinci ezinjengeekhoyili ezaphukileyo okanye ezikhululekileyo. Izinto ebeziza kuba yimpazamo kwimveliso xa kuthelekiswa nento enxibe ixesha elide. Ngokwesiqhelo, umatrasi uqhubele phambili, izinto ezingaphantsi ziya kugutyungelwa yiwaranti okanye okubiza kakhulu kuya kuba kukufumana iwaranti kumatrasi.
Umthetho WOKUBUYISA Umgaqo-nkqubo wokubuya koomatrasi yenye into ofuna ukubuza ngayo ngaphambi kokuthenga. Bahlala benento ebizwa ngokuba sisiqinisekiso sentuthuzelo esiya kuba sihle ngokungacacanga kubude obugcweleyo bokhuseleko.
Ngamanye amaxesha umgaqo-nkqubo wokubuyisa uya kuhlawula ipesenti ethile yokuthenga njengemali yokubuyisela kwakhona kunye nemirhumo yokuhambisa ibuyele evenkileni. Abanye nangona beya kuba ne-perk yokungayenzi loo nto oya kufuna ukuyikhangela xa ubuza malunga neziqinisekiso kunye nemigaqo-nkqubo yokubuyisa.
Ngelixa sigubungele ezona ntlobo ziqhelekileyo zoomatrasi kunye nokuthenga okuqwalaselwayo kusekho uluhlu oluninzi lokukhetha kunye nokwenza ngokwezifiso ezikhoyo kuwe. Siyathemba ukuba esi sikhokelo sasiluncedo ekunciphiseni ukhetho lwakho lokufumana umatrasi ogqibeleleyo kwiimfuno zakho.
Ivenkile eziNxulumene neMveliso Iintengiso zeAmazon × Enkosi!
Oku kuyasinceda siphucule amava akho entengiso. Siza kuzama ukungakubonisi ezo ntengiso kwakhona.
Le nto ...
Ayichanekanga / ayifanelekanga Ibonisiwe kakubi Enye
Yongeza iiNkcazo(Ubuninzi boonobumba abangama-320)
I-Zinus 10 Inch Inkxaso kunye nePocket Spring H… $ 299.00 umthengisi ogqibelele (5923) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ifanitshala ye-D & D ye-Futon yemveli yaseJapan Fl… $ 78.00 umthengisi ogqibelele (338) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Classic Brands epholileyo yeGel Memory Foam 14-I… $ 323.29 umthengisi ogqibelele (21122) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Iwayini yeOctoRose (ebomvu, umbala ngoMeyi V… $ 49.99 umthengisi ogqibelele (1441) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Iingcamango ezingama-43 eziGcweleyo zeGumbi lokuPhila (iiNdlela ezisesikweni kunye neeNdawo eziqhelekileyo)
Iingcamango ezingama-47 zekhitshi yoyilo lwangoku (Imifanekiso yeKhabinethi)
'NGOKWENENE' Iindleko zeFreddie Stroma kunye noJohanna Braddy Ziyabandakanyeka!
Ukutshata ekubonweni kokuqala kukaNate Duhon akaphulukani noBomi obuBodwa: Iyadika emva kwexesha elithile
Isabella Cruise, Intombi kaTom Cruise kunye noNicole Kidman, ngokutshata ngokufihlakeleyo eLondon
U-Emily Blunt uzisa uJohn Krasinski kwiinyembezi ngokuChukumisa iNtetho yeeMbasa yeSAG
Iingcamango ezingama-65 zePatio yoyilo-Imifanekiso kunye nokuHombisa ukuphefumlelwa
IRandy Houser ikhutshelwe uMtshato: Ndibhale Ingoma yethu yokuqala yoMdaniso!
Indawo yoMlilo weGesi (Isikhokelo soYilo lokuGqibela)
Imiphezulu yeetafile zewartz emhlophe (iingcinga zoyilo lwekhitshi)
Ukusetyenziswa kweoyile yeCoconut: Isikhokelo kwiNwele entle, ulusu kunye namazinyo
Izipho zeSikhumbuzo soNyaka: Iimbono zeNdabuko kunye nezeNkcubeko zangoku
I-US Star Soccer Star u-Alex Morgan: Konke malunga neziCwangciso zakhe zoMtshato (kwaye ngubani oyila ilokhwe yakhe yomtshato!)
Owayesakuba nguBachelorette Kaitlyn Bristowe ubhiyozela ukubandakanyeka okude kunabo bonke ngeShawn Booth
Kufuneka-Funda Amanyathelo okuCwangcisa i-Bridal Shower emangalisayo
ukucoca amakhonkco omtshato ekhaya
amakhonkco umtshato opal nedayimane
izitishi zokutya kwitheko lomtshato
Eyona ndawo intle yokuhlala kwiHarbbean honeymoon ihlala kuzo zonke ezibandakanya
Mint umama wengubo yomtshakazi
Uyilo olugqibeleleyo lwegumbi lokuhlambela ngo-2019
Iingcamango ezingama-30 zangaphandle zomlilo (kunye nemifanekiso)
UMeghan Markle kunye neNkosana uHarry babhengeza ngokusesikweni irejista yabo yesisa